Mbido > nleba
Nyefee akaebe nke gị ebe a
Ngwaahịa gị kacha mma ma mee most! Mana echeghị m na ihe ọ bụla nwere ike ịgbake data m lost. Ọ weghachitere ihe m nwere, nke karịrị ngwaahịa ndị gara aga, mana enweghị nke izu 3.5 data na-efu. Ọ bụrụ na echere m na data ahụ na-efu efu, m ga-akwụrịrị $ 50 iji weghachite, ma nwee ike $ 100 ma ọ bụrụ na m nwere Ezi na ihe niile data furu efu dị. Mana ọ bụghị, yabụ na ọ baghị uru $ 100.
Nwanyị Mascha Fujimoto lara ezumike nká
Arizona, USA Machị 16, 2021
Seattle, USA Machị 12, 2021
Jisie gị na mmemme gị. Ha dị obere ma na-eme kpọmkwem ihe akọwapụtara.
The interface dị mfe ịgbaso ma ghọta. Ana m echere gị mmemme ọhụrụ ndị ọzọ n'aka gị.
David Roper lara ezumike nká Hospital IT Director
Blythewood SC, USA Machị 3, 2021
Ke n'ezie messed elu HDD (abụọ ted) bụ zuru okè mgbake.
Ngwaọrụ na - eme ihe na - ekwe nkwa!
Antonis N. Onye lara ezumike nká Injinia
Patras, Gris Feb 27th, 2021
e-automatyk ul. Leśna 17C, 62-006 Gruszczyn iri abụọ na atọ, 23
Outlook wee gbaghaa, ozugbo Windows melite mmemme Email m Outlook kwụsịrị ịrụ ọrụ. M na-eji datanumen Ngwaahịa iji megharia nchekwa email ahụ nke ọma ma ọ rụọ ọrụ. Naanị ihe m ga-eme bụ ịme ihe omume iji dozie data ahụ, gbanwere aha faịlụ data ma na-agba Outlook. Presto ya arụ ọrụ. Daalụ nke ukwuu
Craig Na-arụrụ onwe ya ọrụ
Enwere m obi ụtọ na ịdị mfe nke iji na mgbake ngwa ngwa nke faịlụ ahụ. N'ihe niile, achọghị m ya ọzọ, yabụ m wepụrụ ya mgbe mghachitere faịlụ abụọ.
Víctor Ramón RG Ọrụ Homelọ
Leioa, Bizkaia, Spain Septemba 30, 2020
Daalụ maka ngwaahịa ndị obere ndị nwere nnukwu nsogbu.
Ejiri m ndozi Outlook gị.
Lucy Gold lara ezumike nká
Paris, France Septemba 21, 2020
Zuru oke, di egwu.
Ọ bụrụ na naanị ndị ọzọ ndị a oru oma.
Texas, USA Septemba 1st, 2020
RAR faịlụ nke 115 GB: mebiri kpamkpam ...
Ihe omume gị doziri ya na 5 elekere na 33 mins ...
1K ekele !!
Borsbeek, Belgium August 30, 2020
Aghaghị m izipu ozi iji kelee ụlọ ọrụ gị maka nnukwu ihe a Datanumen Outlook repair ngwaahịa!
M na-eji ihe omume ọzọ emekọrịta echiche m (Companion Link) na ekwentị m yana mmemme ahụ arụ ọrụ wee kpochapụ data ọhụrụ m na kọmpụta m site na data okenye na ekwentị m. Enweghị m nkwado ndabere nke faịlụ ele ihe anya ma enwere m nkụda mmụọ ka m tufuo mmelite dị oke mkpa na ndetu. Ejiri m ọtụtụ ụbọchị ole na ole na-eche echiche ma chọpụta ụzọ m ga-esi mezie nke a site na usoro ọ bụla enwere ike (nsụgharị ndị gara aga, ngwanrọ mgbake ndị ọzọ, ndụmọdụ ndị ọzọ na ntanetị) ma ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, mana ọ nwere obi ụtọ ịchọta Datanumen ngwaahịa ma nwee ike ịrụzi / weghachite lost ndetu! Site na ịbụ obere azụmaahịa ma na-agabiga oge nsogbu nke ndụ m dara ala, mwute, iwe mgbe m chere na m lekwasịrị data m anya na njehie ahụ wee nwee nkụda mmụọ na enweghị ụzọ iji weghachi ya ma nwee nnukwu obi ụtọ ịchọta nke a Datanumen omume na nwere ya na-arụ ọrụ iji weghachi m data, ọ bụ ịtụnanya na software bụ kensinammuo na mfe iji. Nke a bụ nnukwu ụlọ ọrụ ma chọọ ka onye ọ bụla mara na ha nwere ọdịiche na ndụ ndị mmadụ maka nke ka mma !!!
Alan Rudy Freedom Ezigbo
Los Angeles, CA, USA Julaị 17th, 2020
Houston, Texas, US Julaị 15, 2020
Mezie faịlụ m ọzọ nke Microsoft nkewa dị ka "rụrụ arụ". Nde nde ekele yous.
Cavan McDonald lara ezumike nká
Ndi Albans. UK July 9th, 2020
Anwansi anwansị - dozie faịlụ scanpst.exe enweghị ike ịchọpụta dịka igbe akwụkwọ ozi Outlook. Obi ekele maka ngwaahịa dị egwu.
Gị ngwanrọ mgbake sọftụwia dị ịtụnanya ma na-arụ ọrụ dịka champ. Daalụ.
Nwere ike 9th, 2020
DataNumen ngwá ọrụ na-arụ ọrụ zuru oke, mere ọrụ m chọrọ ka ọ rụọ. A + ngwaahịa daalụ.
Ọ ga-amasị m inye ekele m DataNumen Nkechi maka enyemaka gị na ngwanrọ gị nke rụrụ ọrụ ya nke ọma ma kwe ka onye nwere ahụmịhe iji weghachite faịlụ Outlook 2007 PST ya.
Pete M. lara ezumike nká
Calgary, AB, Canada Mee 8th, 2020
Anọ m na-achọ imeghe ebe nchekwa nwere foto ochie, mana enweghị m ike, n'ihi njehie ụfọdụ. Mgbe ahụ, m na-eji DataNumen Zip Repair o mekwara anwansi. Obi dị m ụtọ na m natara foto m. Daalụ maka ngwaahịa gị!
Romania Eprel 22nd, 2020
Ngwá ọrụ gị nyere aka na ịgbake ozi email nwunye m niile. Ana m ekele gị na ndị otu gị niile maka inye ngwaọrụ a na-azọpụta ndụ ma dịkwa mfe iji !!
Ken Mantey lara ezumike nká GE Lighting
Chesterland, OH, USA August 8th, 2019
Milan, Italy Machị 16th, 2020
Ụtụtụ ọma. Ana m anwale software gị ka ị rụzie nchekwa data sql. Mgbe na-agba ọsọ gị ngwaọrụ m ugbu a ike ịhụ m niile data ọzọ 🙂
Ọ ga-amasị m ịkele gị nke ukwuu maka ịme ka ị nwee ike ịghachite igbe email ị tụlere lost, na ngwanrọ DataNume Exchange Recovery.
Ekele ya DataNumen Otu!
Daalụ maka enyemaka gị! Obi dị m ụtọ na otu esi arụ ọrụ.
Texas, US Nọvemba 8th, 2019
I meela nke ukwuu maka enyemaka na-emesapụ aka ma enwere m ekele maka nzaghachi gị ngwa ngwa. Aga m akwado ngwaahịa gị.
Tony nke V
Nwere ike 31, 2019
Daalụ nke ukwuu. N'ezie, ihe ngbanwe ọdịnaya MS Office gị bụ ihe kachasị mma m lere ruo ugbu a.
Tomasz Warmuz Nka na ụzụ Director Landis + Gyr Poland Sp. z oo
Poznań, Poland Nwere ike 20, 2019
Daalụ maka gị zipmmezi. Ọ bụ nnukwu ngwanrọ iji rụzie nke m zip faịlụ.
Luca DM Cogeor na-agba izu
Rome, Italy Eprel 10, 2020
Naanị m chọrọ ịsị ekele maka ịnye mmemme a. M na-eji ya ka ihe ịga nke ọma tọghata a nnukwu OST faịlụ nke na-ekwe ka m nwetaghachi ozi ịntanetị 150 furu efu.
Ọ rụrụ nnukwu ọrụ, obi na-atọkwa m ụtọ.
Daalụ nke ukwuu. Atụrụ m anya na ị nwereost magburu onwe ụbọchị, na ihe dị ịrịba ama izu ụka !!
Asheville, NC Mee 10, 2019
Site n'ụzọ, anyị nwere ekele maka enyemaka gị. Anyị mere mkpebi nke ịzụrụ Datanumen Exchange Recovery ngwá ọrụ ụnyaahụ, na otu n'ime ihe ndị anyị mere mkpebi anyị bụ ezigbo ọrụ ntanetị nke ị nyere mgbe anyị na-anwale.
Ekelere m gị maka IWU gị nke bụ sọsọ sọftụwia m gbalịrị nwere ike iweghachite dbx m rụrụ arụ.
France Eprel 23, 2019
Ngwá ọrụ a nyeere m ezigbo aka. Agbalịrị m sọftụwia ndị ọzọ yiri nke a mana nke a na-eme ihe atọ iji weghachite ozi ịntanetị m niile OST faịlụ.
Nwere ike 20, 2019
Naanị m chọrọ ịsị unu bụ ndị kachasị mma ...
Obi dị gị ezigbo ụtọ! Ugbu a enwere m ike ịnweta ozi kalenda m site na ntọlite ​​ezighi ezi OST (kwesiri inwe Ama kalenda kewara n'ime pst kama itinye na ya ost)
Daalụ ọzọ ma nwee ọmarịcha ụbọchị!
Ozi a dị ka nnukwu BANYERE gị maka ngwa mmezi Outlook na-egbukepụ egbukepụ. Onye ahịa m na-enwe ọtụtụ ọpụpụ ike nke mere ka Outlook pst bụrụ onye rụrụ arụ. Scanpst bịara na njehie na-ezo aka na nsogbu disk. M googled a njehie na luckily sụọ ngọngọ n'elu gị ngwaahịa. M arụnyere na-agba ọsọ na ngwá ọrụ nke were ihe karịrị 2 awa iji wuchaa. Ihe si na nsonaazụ ya bụ Outlook na-arụ ọrụ zuru oke karịa nke mbụ! Onye ahịa m karịrị ọnwa n’ihi na ọ bụ akaụntụ azụmahịa na-adabere kpamkpam na email.
Daalụ maka nnukwu ngwaahịa, m ga-atụ aro ya nye ndị ọrụ ibe m niile. Maka ozi gị, gburugburu ebe a bụ:
Desktop pc (ihe ochie IBM) na dual-core cpu, ebu 4Gb, Windows 7 ọkachamara na Outlook 2007. PST dị ihe ruru. 4.5Gb.
Biko gaa n'ihu n'oké ọrụ ahụ.
Steve IT Ọkachamara
Ambernath, India Jenụwarị 15, 2020
Fernando Hernández Cuestas kwuru
Are na-azọpụta ụbọchị m. Ihe ọ bụla m chọrọ - naanị iji tọghata 2 OST faịlụ Naanị mmemme gị na-eme nke a. Daalụ nke ukwuu!
Ọ bụ Ilya Sevryukov
Moscow, Russia Eprel 29, 2019
Ricardo Freitas Architect Gọọmentị Mpaghara
Funchal, Portugal July 27, 2019
Nke a bụ nnukwu ngwanrọ. Ọ gbakee OST faịlụ oge mbụ ya wee meghee ya na nke mbụ na Outlook 2019. Agbalịrịla m ụzọ atọ atọ nke nrụzi ngwanrọ na-enweghị ihe ịga nke ọma ma na-achọ ịnakwere ozi ochie ahụ bụ lost. Daalụ obo DataNumen! 😊
Peter Keating ex CIO, lara ezumike nká ugbu a
Melbourne, Australia nke July 15, 2019
A oké mmemme iji weghachi ZIP ebe nchekwa. Ekwadoro m ... ma dị mfe dịka ọnụ ụzọ.
Bohdan Sheretiuk lara ezumike nká Marketer SS-ọrụ
Lutsk, Ukraine October 27, 2019
Facile et Ọrụ
Abdellatif FAJR General Manager Business Ngwa
Casablanca Morocco December 10, 2019
Onye isi njikwa Mandip Kanjiya & Onye guzobere Hey Flyer http://www.heyflyer.com/
MS Office nkwalite kụrụ kọmputa m na m ga-ehichapụ ma wụnye ya. N'ime usoro ahụ Outlook anabataghị nke ochie.ost faịlụ na m lost ozi ịntanetị m niile echekwara na folda nchekwa (naanị kọmputa na mpaghara). Nke a bụ ọdịda na nnọchite nke Outlook, ọ bụghị iji mepụta obere folda na sava ahụ. Mgbe awa 6 nke ụjọ, achọtara m saịtị gị wee budata ngwanrọ ahụ, ihe na-erughị minit 30 mgbe e mesịrị, ihe niile dị mma ọzọ.
Ọnye na -bụ Eric Engelbrecht?
M ibudatara gị ele idozi software n'ihi na nke mgbe nile njehie ozi banyere m outlook.pst faịlụ ọ bụghị mechiri emechi n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ikpeazụ ojiji. Sọftụwia gị rụrụ ọrụ zuru oke. My pst faịlụ toro site 1.9gb ka 2.45gm na 'lost data 'enwetaghachiri ma tinye uche na nchekwa abụọ' enwetaghachi '(ọ bụghị naanị tụbara n'ime igbe) ka m chọgharịa. O were ihe na-erughị nkeji 10 maka mgbake zuru oke na nyocha nke ihe ozi ederede enwetara.
Ọzọ ana m asị daalụ maka ịnye ezigbo sọftụwia nke na - eme ihe ọ na - ekwu na ọ na - enweghị oke maka iji onwe gị. Ana m akwado ngwa ọrụ a maka igbe ọrụ kọmputa niile.
Peter Jones Home kọmputa ọrụ
Adelaide, Australia June 27, 2019
A n'ezie oké mpempe software nke bụ super ọma na-ama miri miri ahụ ehichapụ na lost ozi ịntanetị. Ejisiri m ike nwetaghachi ihe ọmụma dị ebube nke ọ nweghị sọftụwia ọzọ m ji mee ihe. Enwere m obi ụtọ na m nwere ike iji ngwa a naanị na cost.
Enwere m faịlụ okwu faịlụ nke nwere mmezi iji rụkwaa, ebe nrụọrụ weebụ gị rụziri faịlụ okwu na 6 nkeji.
Nke a pụrụ iche ma dị ezigbo mma.
Valentin Bogatu engineer physic https://helpwithphysics.com
Ngwaahịa gị mere ihe niile kwesiri ka o mee. Naghachi faịlụ data email m zọpụtara m.
Aga m agwa onye ọ bụla chọrọ ya ngwaahịa gị, ma n'ezie ma ọ bụrụ na achọrọ m ya, m ga-etinye ya ọzọ.
Ihe magburu onwe ya.
Eric Mkpụrụ IT Administrator Cable Teknụzụ Laboratories www.cabal.com
New Brunswick, NJ, USA Jenụwarị 8, 2020
Mgbe nnọchi nke PC nke m, ọ dị m mkpa ịgbake maka ojiji nkeonwe m ochie UST faịlụ na-agbanwe ya na PST. N'etiti ọtụtụ softwares, achọtawo m DEXR.EXE nke dabara kpọmkwem nzube m. Ebe UI dị mfe, DEXR nwere ike nwetaghachi ozi ịntanetị m niile, kọntaktị na otu kọntaktị na enweghị njehie. M na-echeta nke ọma DATANUMEN maka ọdịnihu dị ka akwụkwọ nkọwa maka mgbake data.
Ọ bụ Roberto Baldassar
Marchtali March 7, 2020
Daalụ! Ọ na-arụ ọrụ.
Aga m akwado gị ka onye ọ bụla nwere ịgbake a Tar faịlụ.
Huntsville, Alabama, Njikota Obodo Amerika
Ọtụtụ ekele maka ịme ụdị ngosi gị maka ndị dị otú ahụ
dị ka ndị ezumike nka (nke m bụ otu).
Brian Willis Freelance ntụgharị na mmepe weebụsaịtị
Sọftụwia a dị ezigbo mma. Enwere m ekele gị maka ịnye ụdị ọrụ ahụ dị mkpa (DataNumen Outlook Repair v 1.2 full version) maka ọhaneze. Mee ka m mara ma ị nwere ike ịnye ngwaọrụ ahụ ihe karịrị nke a.
Mohammed Meeran DATEL Sistem & Software FZ LLC
O mechara mara mma.
Ogige Park, Utah, USA
N'ikpeazụ - ngwaahịa nke na-eme ihe ọ na-ekwu na-enweghị ụzọ ọ bụla na-enweghị isi na nsonaazụ dị egwu. Ị mere nke ọma! Achọrọ m ịchọta ngwaahịa gị tupu imefu ego m n'ọtụtụ ndị na-eme mpụ nọ ebe ahụ.
Onye ahịa na-enweghị aha
DZIPR rụrụ ọrụ ebube & gbakee ọtụtụ narị MB foto dijitalụ nke m chere na m ga-abụ lost ruo mgbe ebighị ebi.
Edozi Nza ahụ - Ndụ Na-azọpụta!
Dị natara ihe dị ka 1GB foto site na Zip faịlụ Echere m na m na-eju afọ mana D.ZIPR ka ịkọ ihe site n'ọtụtụ n 'ọnọdụ ogbe. Etufughi m otu foto. Dị mfe & ngwa ngwa iji, kwa. Enweghi ike ịkwado ya nke ọma.
Mgbalị m na DOER bụ ugbu a 100%.
Jim Barnes kwuru
Akwadoo m ụfọdụ faịlụ na a Zip faịlụ site na akwụkwọ ndetu Mac G4 m. Enweghị m nhọrọ karịa ịkwado ha na PC, yana ịnwa ịmebi unzip, Achọpụtara m na ọ dịghị ihe nwere ike imeghe a rụrụ arụ 10.2 GB Archive. Site na skeptisim, ebudatara m DZIPR, ma chọpụta na ọ nwere ike idozi faịlụ m, yabụ m gara n'ihu wee nye iwu ka m wepu njedebe nke ụdị ikpe ahụ. M gbara ọsọ ọzọ, mgbe ọ rụzigharịrị, ọ bụghị naanị na ọ natara ụfọdụ data, ọ natara ya niile! Obi dị m ụtọ na Nkwado Ọsịsa zara ozi ịntanetị m ngwa ngwa, ha nyekwaara aka nke ukwuu (na-agbanwe echiche m maka nkwado ngwanrọ ngwanrọ) Daalụ maka ịme ihe bara uru ahụ. Enwere atụmatụ maka ụdị OS X n'oge adịghị anya?
Mahadum nke Delaware
Mgbe ogbe rụziri, faịlụ niile e ọma rụziri na-adịrị m mac site na windo PKZip na maapụ SaMBa Network Drive. Ekwesịrị m ikwusi ike na enwere m obi ụtọ na ngwaahịa gị na-arụ ọrụ nke ọma, yana nkwado ahụ dị egwu
Ekele, na ekele ọzọ
Daalụ! Ndozi ma chekwaa na flash drive tupu m ahịhịa ntụgharị na OE !!!
Ngwaahịa magburu onwe ya !! Enwere m obi abụọ ma ọ gbakeela nkwado ndabere zip nke ederede email m ma agbanweela m 🙂
Daalụ na ekele m
ọ dị m mma na m chere na m ga-azụta ya
Na-arụ ọrụ dị ukwuu. zoputara m oge kariri ibudata faịlụ a site na ebe ozo di iche nihi na fajiri faili a mebiri emebi, mmemme a na-edozi ya. A nnọọ amamiihe mmemme !!!!!!!! *****
M chọtụrụ ebe post otuto ma ha ahụghị ihe ọ bụla. Ọ na-amasị m inyere ndị ọzọ na-etinye aka na nsogbu na ndị nrụrụ aka zip faịlụ. Anọ m na-arụ ọrụ na PC kemgbe 1982, tupu IBM ma ọ bụ Microsoft na nke a bụ mmemme izizi nke na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ngwa ngwa na nke ọma.
Ọ rụrụ nnukwu.
Nwunye m mere ihe niile.
Obi dị m ụtọ na m nwere faịlụ dbx niile na ndabere site na Nov 19th na ndị ọzọ niile ka nọ na sava email, yabụ ozugbo emezigharị, m dọtara na ozi-e 95, mana ọ bụ ebe niile.
Na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 50.
Enwetụbeghị m zip mmezi ihe na-arụ ọrụ.
Onye a mere!
Enweela m ọtụtụ egwuregwu, na ụdị faịlụ ndị ọzọ rụrụ arụ, na tupu m nweta mmemme a, na-emebi kọmputa m, nke a bụ otu n'ime mmemme kachasị mma m ji, im ga-enyeghachi ya ndị enyi.
Nke a rụzuru nke ọma! Daalụ nke ukwuu! Have zọpụta m otu si
alaghachi azụ ịrụ ọrụ ọnwa iri na isii ọzọ. DZIPR ruru nke ọma
$ 30 ejiri m!
Agbalịrịla m ọtụtụ ngwaahịa n'ọchịchọ m ịgbake a Zip faịlụ nke jupụtara na e-mail afọ zuru ezu mana ndị na-abụghị ndị gara nke ọma, ruo ugbu a. Ebudatara m ụdị ngosi nke DZIPR na agbamume site na nloghachi akuko ka m tinye obere ego ma budata ụdị zuru ezu.
O wutere m, ngwaahịa ahụ zuru ezu nwetaghachi faịlụ m wee kpọtụrụ m nkwado @ mmezi-zip-nweta.com. Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka nchekwa teknụzụ rịọrọ maka njehie sitere na D.ZIPR na mgbe ejiri nlezianya nyochaa, tụrụ aro usoro m ga-anwale. Ọ rụpụtara!
Ngwaahịa a na ezigbo nkwado ụlọ ọrụ echekwala ihe ndekọ dị mkpa m chere na ọ bụ lost maka ezi. Daalụ!
Scott Snyder kwuru
3GB nke foto ka echekwara! Gụsịrị akwụkwọ na kọleji enyi nwanyị echekwara! Daalụ.
Atụmatụ atụmatụ: ike depụta ihe faịlụ na-adịghị azọpụta?
Akwụkwọ OpenOffice arụzigharị na-arụ ọrụ dịka amara! Nnukwu mkpịsị aka ukwu maka D.ZIPR!
Ngwaahịa a dị mma! I chekwala anyi otutu oge. Kpọtụrụ anyị na ngwa ndị ọzọ ị nwere ike ịnwe.
"Ọ na-arụ ọrụ."
Doziri nsogbu m Zip faịlụ, dị ka nkwa.
Ekwetaghị m na ọ ga-arụ ọrụ, mana ọ dị. Too ọjọọ ọ nweghị ike ịrụzi ACE na RAR faịlụ dị ka nke ọma.
"Ọ rụụrụ m ọrụ!"
Agbalịrị m ya na otu faịlụ mebiri emebi site na floppy ọ rụpụtara m. Naanị faịlụ 5 n'ime 40 mebiri emebi na ogo ụfọdụ.
Nwetaghachi ihe niile m mebiri emebi.zip faịlụ Naanị nsogbu bụ na ọ nwere nsogbu na *.zip faịlụ nke onwe ha zipnkuzi. Ma ọ bụghị 10 nke 10!
Anthony Latos kwuru
Califonia, Njikota Obodo Amerika
Daalụ maka email gị ozugbo.
Agbalịrị m nke a ma ihe niile na-arụ ọrụ dị ka nrọ!
Ọtụtụ ekele, enwere m ike ịgbake ihe karịrị 900 MB!
Herbert Hackelsberger kwuru
M ka zutara ma jiri ya mee ihe iji weghachite otu faịlụ .dbx onye ọrụ m nke karịrị 2GB. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu - ekele maka ngwaahịa bara uru.
Steve Forrette MarkeTouch Mgbasa ozi
"Na-arụ ọrụ n'ezie"
Enwere m ngwaahịa zuru ezu, ọ na-enyere m aka ịrụkwa faịlụ 300MB
CHAỊ! I zoputara m awa 2 bara uru nke oge na njem ịlaghachi azụ gafee obodo. Daalụ!
Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ usoro ihe omume bara uru bara uru n’ebe ahụ nke na-arụ ọrụ n’ezie! Agbalịrị m ya n’echiche n’echeghị na ọ ga-arụ ọrụ. DZIPR kpochapụrụ m!
Anọ m na-agba mbọ iji nwetaghachi ozi-e 4 afọ site na draịvụ ike m dara ada n'izu gara aga ma ọ bụ karịa.
Ejiri ụdị ngosi nke onye na-eme ihe - ọ naghị eme ihe zuru ezu ikpe ziri ezi !! Versiondị zuru ezu agbakeela 100% nke ozi m - lee sọftụwia dị egwu - oke ọnụ ahịa.
Most nke oge gị dị larịị screwed ma ọ bụrụ na ị download a zip faịlụ ma o nwere njehie crc, ọkachasị ọ bụrụ zip Faịlị naanị nwere faịlụ ISO. Ngwaahịa a meziri njehie CRC na m zip faịlụ ma kwe ka m wepụ faịlụ ISO na enweghị ntụpọ!
Ọ bụ mmemme dị mma n'ezie, maka ndị na - ebudata faịlụ sfx buru ibu na ịntanetị bụ ndị mebiri emebi, ana m akwado sọftụwia a! ọ na-arụkwa ya zip faịlị na sfx dị mma! mana m chere na sọftụwia a chọrọ ikike ịrụzi rar faịlụ kwa 🙁
Mmetụ dị mma!
Daalụ, nwetara ya na-arụ ọrụ. Nnukwu ngwaahịa - n'ezie onye na-azọpụta ndụ!
Kpamkpam! Nwere ike iji ngalaba akọwapụtara na weebụsaịtị gị ma ọ bụ akwụkwọ nkwado ọ bụla. Mee m amara ma dezie amaokwu CRC, ebe ọ bụ na CRC na Cyclic Redundancy bụ otu njehie. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa otuto, taa, enwetara m mmelite site na email maka ịkekọrịta ọrụ nke nwere ihe dị na ya CAB faịlụ na a Zipfaịlụ. Ọfọn, Nwetazip, PKZip & WinAce niile kọrọ na faịlụ ahụ rụrụ arụ ma enweghị ike imeghe. M gbara ya site na DZIPR na ọ bụghị naanị mere zipFaịlụ rụziri, ma nchọ CAB file bụ kpọmkwem byte maka byte egwuregwu na cabfaịlụ m chọrọ maka mmelite ahụ. O yiri ka obere D.ZIPR Gem bụ ihe Microsoft kwesịrị inye ikikere. Daalụ ọzọ,
North Carolina, Njikota Obodo Amerika
Ga-enweta votu m maka uru PC kachasị mma. Ebe obu na azutara m DZIPR, ejirila m ya ọtụtụ oge na faịlụ ndị na-egosi ihe ọjọọ CRC ma ọ bụ nwee nsogbu ndị ọzọ kpatara Winzip ma ọ bụ WinAce iji mechie ma kwụsị nhazi. DZIPR edozila ihe niile m tụbara na ya. Kedu ihe dị egwu ma dị mma nke injinịa ngwanrọ.
Onye na-ahụ maka ọdụ data Rick Fayter
Ọ ga-amasị m ịkele gị. Azụrụ m DataNumen Zip Repair pekarịrị
awa abụọ gara aga ma ọ rụọ ọrụ zuru oke !!! Enwere ike ịchịkọta ahụmịhe m
SA zọpụtara ọrụ m!
Ọrụ Ardor Kọmputa
Agbanyeghị ọ bụ ezie na na mbụ, echere m na nke a bụ nnukwu ego iji nọrọ na obere mmemme, DataNumen Access Repair nwetaghachị nchekwa data anyị ugbu a, enwere m obi anụrị 😉
nwere mmezi ọganihu nke ọma
M na-ebudata ihe omume zuru ezu ọzọ & data mmezi niile m na-eziga ya na comp m. N'ụzọ ahụ usoro ihe omume ahụ dị ezigbo mma ma dozie 91% nke diski m !!!
M zoputara almost, niile data m dị mkpa !!!
Daalụ maka mmemme DZIPR! Na-arụ ọrụ nke ọma!
Azụrụ m DataNumen Outlook Express Repair wee nwetakwa faịlụ ahụ na folda m nke mechara pụọ ​​na ndepụta OE. Ngwaahịa gị rụrụ ọrụ nke ọma; Daalụ.
Naanị ihe edetu iji mee ka ị mara na mmemme ahụ dị n'elu na-arụ ọrụ nke ọma ma m nwetaghachiri almost E-mail 3000 nke m kpochapụrụ kpamkpam. Agaghị m ala azụ ịkwado ya na ndị ọrụ ibe na ndị enyi m.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ SA Bias Industries Limited
Sọftụwia gị nyere m aka nke ukwuu, ekele daalụ daalụ ekele nke ukwuu !!!!!!!!!!
Naanị m chọrọ ime ka ị mara nke ahụ DataNumen DBF Repair nwee ike nwetaghachi data niile na ACT anyị! Ebe nchekwa data 2000.
Sakramento Magazines Corp.
Agbalịrị m ngwaahịa atọ ọzọ tupu achọta m Ọganihu Outlook Express Iweghachite. Abụọ n'ime mmemme ahụ chọtara ozi niile, agbanyeghị, ozi ndị ahụ enweghị data n'ime ahụ. Onye nke atọ achọtaghị email niile dị. Mgbalị mbụ na Ọganihu Outlook Express Iweghachite gosipụtara faịlụ niile na ikpe ahụ. Azụrụ m ngwaahịa ahụ na ozi ọ bụla m batara nwere ike weghachite ozugbo. Nke a bụ ngwaahịa dị egwu ma bụrụkwa ọnụ ahịa ya.
Bill Hair My Kọmputa Guy
Nke ahụ rụpụtara nnukwu. Daalụ maka enyemaka gị.
Ndewo. Nanị m zụtara mmemme gị, ma dozie otu ihe dị mkpa ZIP faịlụ. Daalụ.
Azụtara m sọftụwia gị ụnyaahụ iji weghachite 7GB tar faịlụ ahụ bụ ndekọ m niile "Akwụkwọ na Ntọala" site na laptọọpụ m nke na-aga ọrụ. Offọdụ n'ime akwụkwọ ndị ahụ dị oke mkpa * dị ka ngwa ngwa ngwa ngwa m, akwụkwọ ọnụahịa maka azụmahịa m, na nchịkọta ụtụ isi maka onye na-akwụ ụgwọ m.
Freedị freebie gosipụtara na ọ nwere ike idozi ihe niile m lost, ya mere azụrụ m ma debanye aha na ngwanrọ ahụ. Mgbe m gbara ya, ọ chekwara Docs_fixed.tar, m wee gbaa ọsọtar xvf * na ya. Ọ nwụrụ na njehie ma gafere most nke ọdịnaya.
Agbanyeghị, agbaghaara m ọzọ tar nye iwu na arụmụka filename ka ị wepụta ndị m nwere mmasị na ha (ego m niile ”
Akwụkwọ ndekọ aha), site na Chukwu, o mere ka ha nile zuo oke.
Achọrọ m ịsị daalụ. Daalụ. Daalụ. Daalụ. Daalụ. Daalụ. Ọ bụrụ na enwere ihe m nwere ike imere gị n’ọdịniihu (nkata mkpụrụ osisi n’oge ekeresimesi, saa ụgbọ ala gị, bulie akwa gị, mmeko mmekọahụ) Ekelere m gị, ụlọ ọrụ gị, yana sọftụwia gị.
Unu mara jijiji.
Kevin Smith Eletrọniki Onye Mmebe, Onye Ọrụ Ugbo, Ọkụ Egwuregwu, Egwú
Daalụ maka enyemaka gị. Obi dị m ezigbo ụtọ na DZIPR.
Jim Stacey kwuru
Ihu Peeji Foto
Enwere m 800 MB zipfaịlụ na 97,00 nke emere na Solaris nke nwetara njehie na "Central dir" ya. Ozugbo nke a mere, enweghị m ike ịnweta karịa nke mbụ ~ 30,000, yana ọkọlọtọ zipidozi ụlọ ọrụ na-abịa dị ka akụkụ nke pkzipc na merieZip emeghi _obughi ihe iji nyere aka.
Nke a na-ewute m karịsịa n'ihi na m maara most ma ọ bụ faịlụ niile ahụ ka dị ebe ahụ - ọ bụ naanị njehie na '' tebụl ọdịnaya '' nke nchekwa ihe.
Eji m ya DatanumenNke OnyeZIPR na-agbake 98% nke faịlụ na Archive! Obi dị m ụtọ na m chọta a ụlọ ọrụ dị ka Datanumen iji ima otu esi ewepụta ihe dị mma na ebe ndebe ihe, ọkachasị mgbe imirikiti dir dị njọ.
Site n'ụzọ, ngwaahịa ndị ahụ dị mma. Ana m aha ekele m nye ụmụ okoro ndị mepụtara ngwa ọrụ bara uru.
Ha doziri mkpụrụ obi m n’ezie.
E. Madsen Chief engineer
Hillsborough, NJ, Njikota Obodo Amerika
Robert Fletcher kwuru
Marietta, GA, Njikota Obodo Amerika
Nke a rụzuru nke ọma. Daalụ!
Daalụ maka ntinye. Achọpụtara m ihe m ga-eme ugbu a. Natara almost ihe niile m lost ozi-e. Daalụ maka ezigbo ngwaahịa ...
Justin Moss Ngwa Injin
Achọtara m ngwá ọrụ gị mgbe m na-eji weebụsaịtị http://rmse.awardspace.com na m ga-achọ ịsị na ngwaọrụ gị dị egwu na ọtụtụ atụmatụ. Ezigbo Ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ndepụta nzipu ozi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ biko debanye aha m. Ekele, JA
Enwetara m DVDRom na zippst pst-faịlụ. Enweela m ike iwepụta ya na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ.Achọrọ m ikele gị maka ụdị nkwado mara mma na enyemaka niile ị nyere m. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka gị na AOR enwere m ike ị gaghị agbake data na faịlụ ahụ.
Echegbula, ọ rụrụ ọrụ! Abụ m SOOO Obi ụtọ! Daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị niile! Enwere m afọ ojuju 100% na m ga-akwụsị inye gị nsogbu. lol. DAALỤ ỌZỌ!
Ana m ekele gị ọzọ maka enyemaka niile ị nyere, m ga-akwado ngwaahịa a nye onye ọ bụla nwere nsogbu yiri nke a!
Ọzọkwa, MN, USA
Daalụ maka okwu gị.
Have nwere ezigbo ngwaahịa, ọ weghachitere m ọtụtụ faịlụ.
Arthur J Wehlow Manager Express Akaụntụ Ngwọta
M ọma wepụ data.
Echere m na m ga-ahapụ data niile ahụ ...
Enwere m ekele maka enyemaka gị, daalụ ọzọ.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị - enwere m ekele maka ya.
Onye ọrụ na Procter & Gamble
Ndewo, daalụ maka ịzaghachi. Ejisiri m ike idozi ya n'onwe m kemgbe email izizi, ya mere wutere gị na m nyere gị nsogbu. BTW, hụrụ ngwaahịa ahụ n'anya.
Ọ ga - ekwe omume ịkọwapụta ebe na aha faịlụ ọ bụla na batch Repair tab? Nke a dịworị na Repair taabụ, mgbe naanị ịhazi otu faịlụ, mana ọ ga-aba ezigbo uru ma ọ bụrụ na ọ nwere ike idezi nkọwapụta faịlụ faịlị na ntinye nrụzi.
Ngwaahịa dị ukwuu n'ụzọ! AOR agbakeela most nke ihe ndị ahụ sitere na faịlụ PST 6GB dị ezigbo mkpa. Mgbalị ndị m mere na SCANPST bụ naanị 500mb natara!
Mark Humphrey Onye njikwa Network
M zụtara taa gị Advanced Outlook Express Repair - Ekele, ọ rụrụ ọrụ ebube!
Ewezuga ụfọdụ obere ihe, dị ka osisi na-egbu maramara n'oge ọrụ na-agbake, ma ọ bụ, ntinye nke ọdịnaya nke igbe mbata dbx n'ime faịlụ 2 nwere otu oge e-mails. Ee, agwara m sọftụwia ahụ ka o mepụta faịlụ ọzọ nwere ozi e-nwetaghachi mgbe m nwetachara e-mail 2000, mana, echere m na m ga-enweta faịlụ abụọ na-aga n'ihu gbasara ụbọchị e-mail, ọ bụghị ihe ịtụnanya nke folda 2 na otu oge ahụ nke oge e-mail!
Mana, dịka m kwuru na mbụ, ihe ndị a bụ obere ihe, ma karịa ihe niile, enwere m obi ụtọ maka ọrụ sọftụwia gị rụrụ, maa, aga m akwado ndị enyi gị.
Achọrọ m ka ị nwee ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ịzụlite & ịmepụta mmemme dị otú ahụ!
Ntuziaka Ime Mmụọ Yigal
Daalụ maka nzaghachi ọsọ ọsọ na nke ọma. Ihe ngwọta gị rụpụtara! The Large File Splitter software na-arụ ọrụ, na mgbe ahụ Advanced Zip Repair natara faịlụ ọ bụla!
Ugbu a abụ m onye ahịa nwere afọ ojuju, enwere m obi ụtọ ịnọgide na-eji ngwaahịa a. Daalụ ọzọ, ma nwee ụbọchị zuru oke.
Lakeland, FL, Njikota Obodo Amerika
Enwere m nsogbu na faịlụ outlool 1.5GB, enwere m nsogbu ma AODR edozi nsogbu m ma nyere m aka naghachi data m niile, Daalụ nke ukwuu DatanumenOtu ndi nyere m aka nhọta nke ezigbo akụrụngwa maka nsogbu m.
Atụmatụ. Jeddah dị na Saudi Arabia
Daalụ maka nzaghachi gị - nwee ekele maka enyemaka gị.
N'ezie, azụrụ m AOER ụnyaahụ, na l niileost ozi ịntanetị natara !!
AOER yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma kwesiri idozi nsogbu m niile nke OE!
Enwere m lost ozi-e ndị dị mkpa n'oge usoro mgbakọ ahụ amaghịkwa otu esi achọta ha ma ọ bụ meghee ha. Ngwaahịa gị kpebiri nsogbu ahụ (mechara).
Agbanyeghị, ịkwesịrị ịkọwara ndị ludites dịka m na ihe ọ bụla BAK nwere ike weghachite DBX. Ihe most faịlụ na-ezighi ezi m chọrọ bụ aha BAK (nke m ghọtara nwere ike ime na usoro compac) ọ were m ụbọchị nyocha iji rụọ ọrụ na m nwere ike ịgbanwe aha faịlụ ahụ wee tinye ngwaahịa gị ka ịme ndị ọzọ. Ozugbo m rụrụ ọrụ ahụ, ọ dị ka ọgwụgwọ!
michael mitchener mmgbụgba ume
Anyị nwere 60 Gigabyte zip faịlụ nke na-emeghe. Advanced Zip Repair enweghị ike ịrụzi ya dịka o buru oke ibu. Otú ọ dị, DataNumen nyere m nnukwu sọftụwia ọzọ whcih kewara faịlị n'ime faịlụ 1 Gigabyte nwere ike ijikwa, yana Advanced Zip Repair ihe ịga nke ọma rụziri ọ bụla otu. Anyị anwaala ọtụtụ ngwaahịa nrụzi ndị ọzọ na-enweghị ihe ịga nke ọma, yabụ m ga-alaghachi DataNumen ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu data ọ bụla ọzọ n’ọdịnihu. Ngwa ahịa bara uru na nkwado dị ukwuu!
Margaret Messick Costume Ngwaahịa Ngwaahịa
Davis, CA, USA June 16, 2015
Mgbe ihe karịrị 10 awa nke nọ n'ọrụ oge n'iyi ịkụziri MS na ihe bụ nsogbu bụ mgbe m kwalite m Outlook 2010 ka 2013 na autogeneration nke mutiple.ost faịlụ m mechara hapụ. mgbe ha gwara m na ha enweghị ike imeghe nke mbụ.ost faịlụ. Enwetara m echiche ahụ na-egbuke egbuke iji mee ngwa ngwa na.ost ntụgharị .pst ntụgharị na ọganihu - 3.8GB nke data bara ezigbo uru nye m nọ na aka m - ihe a niile mgbe nkwado MS kachasị elu maka Outlook kwuru na ha enweghị ike ịme ihe ọ bụla. Anọ m ebe dị anya site na kọmpụta kọmputa mana mgbe ị matara ihe karịrị nkwado ntanetị ga-achọpụta ngwa ngwa na ị nọ ná nsogbu. Ọ na-arụ ọrụ...
RJ Collins guzobere V360
San Diego, CA, USA Mee 15th, 2015
Enweghị m nsogbu na progremm a pụtara ìhè. Okwu nye ndi ahu nwere ike nwee nsogbu ufodu. Ọ bụrụ na 'DataNemen Rar Mmezi 'Mmemme okpu ịrụkwa a file na ụfọdụ na-agbalị ịrụzi ya na ọzọ ndekọ _ a ndekọ na ihe mpụga flash ma ọ bụ ike-draịva yealded nsonaazụ kacha mma m. Ọ bụ naanị n’okwukwe ka m mee nke a, most nke oge ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Oge gara aga, azụrụ m Datanumen Outlook Repair ma enwere m obi ụtọ na ya, na-eji ya oge oge. Ugbu a, m ga-agbake ehichapụ ozi ịntanetị site na ụyọkọ faịlụ NSF Lotus Notes. Echere m na ị nwere ike ịnwe ngwaahịa dị mma mana ọfụma ị nweghị ihe ọ bụla maka Lotus Notes. Ọfọn, ebe ọ bụ na ị na-eme ihe ziri ezi, gịnị ma ị Datanumen Mmezi NSF? Ezi ekele, Roberto
M ga-enwe ọ happyụ karịa ịhapụ nri-azụ banyere njikọ aka m bara uru nke ngwaahịa gị _ ndụmọdụ ụfọdụ dịkwa ka ọdịda siri ike nke 'DataNewmen Rar Mmezi 'omume ịrụzi a rar faịlụ. Achọpụtara m na mgbe nke a mere, ihe ịga nke ọma na ndozi faịlụ a na-ekwu okwu aburula nke ọma site na ịkwaga ya na ndekọ ọzọ na ịmeghachi ọrụ ebe ahụ _karị na mpụga ma ọ bụ draịva mpụga.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ọnụahịa m nke ngwaahịa a na nkọwapụta nke onwe m ọ bụla ị nwere ike ịmachi ya na mpaghara _ 'United Kingdom'. Daalụ
Oh mma m, I meela! Enweghị m ike ikwere na ị nwere ike idozi ya! M na-agbalị n'ụzọ nkịtị ihe ọ bụla ọzọ- nke a bụ ịtụnanya, na m nnọọ ekele.
Daalụ ọzọ maka enyemaka gị! Obi di m uto ide ederede ma oburu na ichoro onye- onweghi onye ozo nwere ike imezi ihe a !!
Mandy Clark kwuru
United States Sep 16, 2015
Daalụ Alan, Mmezi rụrụ almost zuru okè ... atụghị m anya nke ọma. Daalụ nke ukwuu. Helmut
Helmut Demmelhuber Demmelhuber na-agba izu
Tübingen, Germany Sep 13, 2018
Daalụ nke ukwuu maka ịkwado --- ọ rụrụ ọrụ naanị ịmepụta profaịlụ ọhụrụ.
Onye nwe CARisma
Houston, TX, USA Mee 23, 2018
Naanị m chọrọ ịsị Daalụ maka sọftụwia ahụ.
My faịlụ data Outlook dị mostly ofu.
Achọrọ m inyocha ma hichapụ ọtụtụ ndenye ma, echere m, enwetaghachiri most nke data m.
Agaghị m ama ihe m nwere lost na-adịgide adịgide!
Naperville, IL, USA 4thbọchị nke anọ, 2018
Richard Network Manager Fix
Santo Domingo, Dominican Republic Dec 30, 2018
Ihe omume gị yiri ka ọ na-arụ ọrụ zuru oke ka m nwere ike ịnweta faịlụ ndị ahụ
na Windows Explorer ma ọ bụ usoro Archive.
Ọzọkwa, ana m ekele gị maka enyemaka gị na mmemme a
egbula oge n'ịkwado ya.
Neville Ebe obibi
Ọstrelia Jan 17, 2019
Daalụ nke ukwuu maka enyemaka na mmasị gị never nwetụbeghị nsogbu ọ bụla.
Afọ juru m afọ. Ana m akwado gị onye ọ bụla. Achọrọ m ka ị gaa n'ihu.
Ankara, Turkey Jenụwarị 29th, 2019
Brownwood, Texas, USA Ọgọst 13th, 2014
Dị ọnụ ma ọ mere ihe niile kwere nkwa gụnyere mgbakwunye
Kedu ego ole bụ uru ahụ? Ukwuu na-atụ aro!
North Vancouver, BC, Canada Nọvemba 1st, 2015
Advanced Outlook Repair arụzigharịrị 19GB Outlook 2007 .pst nwere otutu nchekwa sitere na afọ 15. Ọ ghọrọ nke emerụ mgbe a siri ike shutdown, na-agaghị emeghe, ọbụna na-adịghị ize ndụ na ọnọdụ. Anụrụ m banyere ngwá ọrụ gị site na "chcw" na ExpertsExchange.com yana site na nrụzi percentages tụnyere tebụl n'etiti ngwaọrụ dị na Datanumen.kpo. Emere m otu .pst, wee nwaa enweghị ihu ọma na Microsoft scanpst.exe. Ngwaọrụ nke atọ enyerela aka ọtụtụ afọ gara aga Outlook Express ntughari ka m lere anya na ntanetị. Advanced Outlook Repair bụ naanị onye na-enweta nkwenye dị mma maka ikpe dị mgbagwoju anya, ha gosipụtara ihe atụ nke ndị dị otú ahụ, yabụ achọtara m dere ma zụta ya. Nzọụkwụ mbụ ahụ kwuru na faịlụ mbụ ahụ meghere site na isi mmalite ọzọ (agbanyeghị agbanyeghachi). Agbalịrị m imegide ya, na nkeji ole na ole (ihe dị ka 20%), Outlook m mepere wee mepee ya - ya na nchekwa folda na ozi ịntanetị zuru ezu Ọ tụrụ m ụjọ n’ihi na m chere na m bitụrụ ihe aka ma mechie ya. Nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, na
Houston, TX, USA Nọvemba 1st, 2015
Melbourne, Australia Jenụwarị 1st, 2017
Ihe ngosi Disk gosipụtara ihe omume ọkachamara atọ ọzọ nke na-enweghị ike ịmepụta ihe oyiyi ISO - nke a na-arụ ọrụ zuru oke. Ọ bụ ezie na enweghị ike ịmalite ya na USB ma ga-agba ọsọ site na OS na-agba ọsọ, ọ dị ngwa ngwa, 1TB n'ime ihe karịrị awa 2 iji mepụta onwe ya, wee weghachite ya n'enweghị ntụpọ. Na ike nke arụmọrụ ya, ahụ ike, yana nkwado mara mma ha nyere, m ga-akwado sọftụwia ha nye onye ọ bụla nọ na mkpa.
Wayne Rice lara ezumike nká
Bostna, MA, USA Jan 25, 2017